JNNUMX budada (147-1146963-51) | neeroprotective iyo neurotrophic compound
/ Products / Nootropics budada / J 147 budada
Rating: SKU: 1146963-51-0. Category: Nootropics budada
AASraw waxaa ku jira awoodda wax soo saarka iyo wax soo saarka laga bilaabo gram ilaa nidaamka xajmiga ee budada J 147 (1146963-51-0), iyadoo la raacayo nidaamka CGMP iyo nidaamka xakamaynta tayada la socon karo.
Budada J147 markii ugu horaysay ee lagu sameeyay 2011, cilmi-baarayaashuna waxay sameeyeen dhowr daraasadood oo muujinaya in ay beddeli karaan xasuusta xusuusta iyo jaahwareerka Alzheimers oo jilicsan ama gaabis ah. Laakiin ilaa daraasaddan, ma aysan ogeyn sida ay u shaqeeyeen unugyada. Waxay awoodeen inay muujiyaan in budada J147 ay ka shaqeyso iyadoo la adeegsanayo ATP, borotokool ee mitochondria iyo ilaha mobile ee tamarta. Markii ay budada J147 joogeen, nuuroonada ayaa laga ilaaliyey sunta oo la xidhiidha da'da. Tijaabooyin dheeraad ah ayaa muujiyay in budada J147 ay kordhinayaan heerarka ATP waxayna kor u qaadayaan heerar caafimaad leh oo ka sii fiican oo mitokondria ah
Fiidiyowga JhNUMX video
Caanaha J 147 Calaamadaha aasaasiga ah
Name: J-147 budada
Qaaciddada Molecular: C18H17F3N2O2
Miisaanka kelli: 350.3349896
Dhibcaha Biyaha: 177-178 ° C
Kaydinta Nabadgelyada: 4 ° C
Color: Caddaan cad ama midab cad
Dufanka J-147 ee kor u qaadaya shaqooyinka maskaxda iyo wareegga kor u qaadista
J 147 (1146963-51-0) Isticmaal qiyaasta
Iyadoo la adeegsanayo qorshe daahfurka daroogada ee cudurka Alzheimers (AD) oo ku saleysan cuduro fara badan oo da 'weyn, waxaan aqoonsanay dhisme awood leh oo leh waxtarka xusuusta jiirka iyo moodooyinka xayawaanka AD. Maaddaama dhismahan, budada J-147, ay tahay fenyl hydrazide, waxaa jiray walaac laga qabo in lagu dhexqaadi karo amineyaasha / hydrazines-ka udgoon ee kansarka keena. Si loo baaro suurtagalnimadaas, waxaan baarnay dheef-shiid kiimikaadka budada J 147 ee ku jira bini-aadamka iyo maaddada microsomes-ka iyo plasma-ka. Waxaa la muujiyey in budada J-147 (1146963-51-0) aan lagu beddeli karin amines ama hydrazines, in qalfoofka uu si aan caadi ahayn u deggan yahay, iyo in dheef-shiid kiimikaadka oksaydhku ay sidoo kale neuroprotective yihiin. Waxaa la soo gabagabeeyay in dheef-shiid kiimikaadka waaweyn ee budada J 147 (1146963-51-0) ay wax ku biirin karaan firfircoonaanta noolaha xoolaha.
J 147, oo laga soosaaray curcumin curry curricia curricin, wuxuu leeyahay sumoobo hoose oo runti wuxuu rogaa waxyeelada neur-mareenada laxiriirta Alzheimers.
J 147 (1146963-51-0) wuxuu ahaa borotiinka mitochondrial oo loo yaqaano ATP synthase, gaar ahaan ATP5A, subunit oo ah borotiinkan. Dajinta ATP waxay ku lug leedahay jiilka mitirka ee ATP, kuwaas oo unugyada u isticmaala tamarta.
Cilmi-baarayaashu waxay muujiyeen in hoos u dhigista hawsha ATP synthase, waxay awoodeen inay difaacaan unugyada neuronal tiro badan oo sun ah oo la xidhiidha da'da maskaxda. Mid ka mid ah sababaha saameyn ku yeesha neeroprotective waxaa loo maleynayaa inay tahay doorka excitotoxicity ee dhaawaca unugyada.
Excitotoxicity waa habka neefsashada ee nuujiyeyaasha ay waxyeello u geystaan ​​oo ay dilaan by-ka-ka-qaadista rijeetada ee neurotransmitter glutamate. Ka feker sida ay u yartahay sida iftiinka iftiinka ah ee la gooyey iyo banaanka si aad u deg deg ah si uu u dhiciyo inuu keeno nalka iftiinka uu ku dhufto.
Dhawaan, doorka ATP-da ee xakamaynta nullobrotection ee ka soo horjeeda dhaawacyada excitotoxic waxaa lagu muujiyay daraasad khafiif ah . Daraasaddan labaad waxay muujisay in qaababka moodada ay muujinayaan qaabka bini-aadanka ee istiraatiijiga ah ee "ATPase factor factor" 1 (hIF1), taas oo keenta adkeyn joogto ah oo ah ATP synthase, waxay aad ugu adkayd dhimashada neuroonka ka dib dhaawaca maqaar-xumada. Xogtaasi waxay la socotaa daraasaddan cusub ee JxNUMX, taas oo korodhka IF147 ee jiirarka hoos u dhigtay hawsha ATP synthase (gaar ahaan ATP1A) oo ahaa neuroprotective.
Digniin ka samee budada Raw J 147
Xogta la soo bandhigay halkan waxay muujinaysaa in budada J-147 ay leedahay awooda lagu badbaadinayo garashada garashada marka la marayo marxaladda dambe ee cudurka. Awoodda xashiishka J-147 si loo hagaajiyo xasuusta jadeecada da'da ah ee AD waxay ku xiran tahay soo saarista nikotiinka neurotrophic (NGF) iyo BDNF (maskaxda lagu xakameeyo nuurotrophic factor) iyo sidoo kale dhowr proteins BDNF oo muhiim u ah barashada iyo xasuusta. Isbarbardhigga udhexeeya J-147 (1146963-51-0) budada iyo mujaahiriil ee qaabka scopolamine wuxuu muujiyay in inkastoo labadaba ay ahaayeen kuwo isbarbardhigaya samatabbixinta xusuusta gaaban, budada J-147 waxay ka sarreeyeen samatabbixinta xasuusta xuduudaha iyo isku darka labadii shaqeeyay ugu fiican ee xasuusta macquulka ah iyo xusuusta.
Cudurka Alzheimer waa cudur maskaxeed oo horayba u socda, oo dhawaan loo qaaday asal saddexaad oo horseed u ah dhimashada Maraykanka iyo saameynta in ka badan shan milyan oo Maraykan ah. Sidoo kale waa sababta ugu badan ee waallida ee dadka qaangaarka ah, sida laga soo xigtay Machadka Qaranka ee Caafimaadka. Inkasta oo daawooyinka intooda ugu badan ay soo saareen sanooyinkii hore 20 ay bartilmaameed ka dhigteen lacagta cilladaha amyloid ee maskaxda (taas oo ah calaamad muujinaysa cudurka), wax yar ayaa lagu xaqiijiyay kiliinikada.
"Inkastoo daawooyinka intooda ugu badan laga sameeyay sanooyinkii hore 20 ay bartilmaameed ka dhiganayeen bakhaarada amyloid plaque ee maskaxda (taas oo ah calaamad muujinaysa cudurka), cidina ma xaqiijin kiliinikada," ayuu yiri Schubert, oo ah qoraaga sare ee daraasadda.
Dhowr sano ka hor, Schubert iyo asxaabtiisu waxay bilaabeen inay daaweeyaan cudurkan xagasha cusub. Halkii aan diidi laheyn amyloid, shaybaarku wuxuu go'aansaday in uu ku ekaado khatarta ugu weyn ee cudurka da 'da jirran. Isticmaalka shaashadaha ku salaysan unugyada ku salaysan sunta dhalmada ee maskaxda la xidhiidha, waxay soo saartaa budada J 147 (1146963-51-0).
Markii hore, kooxdu waxay ogaatay in budada J-147 ay ka hortagi karto oo xitaa dib u celin karto xusuusta luminta iyo cudurka Alzheimer ee jiirka oo leh nooc ka mid ah qaabka la iska dhaxlo Alzheimer's, qaabka ugu badan ee jiirka loo isticmaalo. Si kastaba ha noqotee, qaabkan cudurka wuxuu ka kooban yahay kaliya 1 boqolkiiba kiisaska Alzheimers. Qof kasta oo kale, da'da waa khatarta koowaad, ayuu yidhi Schubert. Kooxdu waxay dooneysay inay sahamiso saameynta murashaxa daroogada ee jiirka jiirka oo si dhakhso leh u da 'yar isla markaana la kulma nooc ka mid ah waallida oo aad ugu eg cudurka aadanaha ee la xiriira da'da.
J 147 Khamri cadi ah
Suuq-geynta Shirkadda Raw J 147
Sida loo iibsado budada J 147 ee AASraw
β-Phenylethylamine HCL budada